Cinezela 1 Ukuba UneBhajethi | Martech Zone
Cinezela 1 Ukuba UneBhajethi
Lwesine, Okthobha 22, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndiyakhumbula xa i-blogger yathatha Scoble ivuliwe. Ibhlogger yamema uScoble kumnyhadala wakhe emva koko yabhaza xa uScoble ecela ukuhamba kunye neendleko ezihlawulwayo. UScoble uphendule kwi-Intanethi ngokunjalo, kwaye wenza umsebenzi omkhulu kuyo.
Le veki ibinzima (kodwa imnandi kakhulu) iveki. Ndinezahluko ngenxa yencwadi yam, ndigqibezela iiprojekthi ezi-2, kwaye ndisasebenza nabathengi abanokubakho. Ndibamba abantu abaninzi veki nganye ngefowuni, nge-imeyile, nge-Twitter, ngoFacebook, ngoPlaxo… njl. Njl. Ndikhalimelwe kabini kule veki ngabafundi endingakhange ndibaphendule kwaye ndinethemba elinye lokuba ndikuthathe kancinci ukungxamiseka .
Ithemba ibiyimpazamo yam- bekufanele ukuba ndiyayilandela ngokuqinileyo inkampani. Abafundi lelinye ibali, nangona kunjalo. Ndifumene umnxeba apho inenekazi lisithi,
Iyintoni nawe bantu be-Intanethi-awuyiphenduli ifowuni, musa ukuphendula i-imeyile… musa ukuphendula!
Khange ndixolise. Endaweni yokuba ndimxelele inyani. Ndine okungenani iindwendwe ezintsha ezingama-20,000 ngenyanga kwibhlog yam, mhlawumbi izimvo ezingama-250 (uninzi luyi-SPAM), kunye nezicelo ezingaphezu kwe-100. Izicelo ayizizo izicelo zeenkonzo, nangona. Ngabafundi nje bafuna ingcebiso eyongezelelweyo okanye ulwazi. Ndizama ukuphatha ezi zinto ngeposi zebhlog. Andisoloko ndiphendula. Ngapha koko, andiphenduli ngokwesiqhelo.
Nantsi i-imeyile endiyifumeneyo namhlanje ngesihloko emva kokuba ndibhale inethiwekhi kwaye ndacela inkxaso yabo kwi-Top 50 Indiana Blogs poll:
Ndibhalele imiyalezo emininzi ngaphakathi kwebhlog yakho kwaye ndikuthumele ii-DM ezahlukeneyo kwi-Twitter ndicela izimvo zakho, izimvo kunye neengcebiso ngeendlela ezahlukeneyo zokuthengisa zedijithali kwaye andikaze ndifumane mpendulo kuwe. Ngokuqonda, ndiyazi ukuba uyindoda exakeke kakhulu, ngokuqala inkampani yakho entsha nayo yonke into, yiyo loo nto ndingazange ndikuthathe ukuswela kwakho iimpendulo buqu (ngaphandle kwento yokuba UChris Brogan, IBheth Harte, UErik Deckers Ndisoloko ndiphendula imibuzo kum).
Kuyamangalisa ukuba uChris, uBeth noErik bakwazile ukuqhubeka ngoluhlobo! Ndade ndaya kude kube yi-3AM kwaye ndigqibe kuphela ukuphononongwa nokuphendula kwi-imeyile. Ndijonge phambili kwingcebiso kaChris, uBeth noErik ngendlela endinokuqhubeka ngayo nenani lezicelo endizifumanayo.
Izolo, bendikwinkomfa yengingqi kwaye bendifakwe ngabantu abayi-3… omnye ebengumhlobo, omnye ebengumqeqeshi wam weZentengiso, kwaye omnye engumthengi. Umhlobo kunye nomqeqeshi wokuthengisa baqhula ngam bangaze baphendule umnxeba okanye ii-imeyile abandithumelele zona. Ndijonge umthengi wam ndathi, "Ngaba ndiyayiphendula iminxeba yakho kunye nee-imeyile?". “Ewe,” watsho, “… soloko… ngamanye amaxesha ezinzulwini zobusuku! Ndicinga ukuba usebenza iiyure ezingama-24 ngosuku. ”
Ngamanye amaxesha ndiyakholelwa kwiwebhu kwaye abantu bayathanda UChris Anderson undenze kakubi kunye neshishini lam. Umnini-mhlaba, abantu endibatyalayo, iinkampani endizisebenzisayo kunye nabathengisi abakho simahla. Ngenxa yoko, andinakusebenzela khulula. Kuya kufuneka ndigxile:
Abaxhasi - aba ngabantu abahlawula iimveliso kunye neenkonzo zam.
namathemba - ezi ziinkampani ezinohlahlo-lwabiwo mali ezikulungeleyo ukuba ngabathengi.
Ilizwi loMlomo - ezi ziinkampani ezithunyelwe kum yinethiwekhi kunye nabathengi bam abaziyo ukuba inkampani inohlahlo-lwabiwo mali kwaye bakulungele ukuba ngabathengi.
Ezinye iZicelo - ezi yiyo yonke enye into… ii-imeyile, izicelo zeefom, ukufowunelwa, njl. Njl. Ezi zihlala ziluhlu lwam kuba ndisebenza ku-1, 2 no-3.
Ngaba ndilahleka ngamathuba ngenxa yale ndlela? Mhlawumbi-yiyo loo nto ndifumana ukuthengisa ukuthengisa apha e-Indianapolis. Andinaluvo. Into endiyaziyo kukuba "ezinye izicelo" zingandithatha inyanga ukuphonononga kwaye ndiphendule… kwaye andinakukwazi ukuchitha iinyanga ndisenza oko.
Abafundi asingabo abathengi. Ababhalisi abangabathengi. Oko kunokuvakala kungqwabalala, kodwa abafundi kunye nababhalisi abahlawuli mali yabo okanye ulwazi oluvela kule bhlog. Andinasivumelwano senqanaba lenkonzo kunye nabafundi okanye ababhalisile.
Le bhlog ayisiyoshishini elinenzuzo kwaye andinguye usozigidi we-Intanethi… kude nayo. Ndisebenza nzima, nangona kunjalo, ukuze ndiyifumane. Ngokukhawuleza ukuba ibhlog ibhatale onke amatyala am, ndingavuya ukuhlala phantsi iveki yonke ndiphendule izicelo zabafundi bam kunye nababhalisi. Kude kube lelo xesha… Ndidinga ukuya kwinkonzo my abathengi.
Ukuba ungathanda ukuba ngumthengi, yitsho kwakhona isicelo sakho. Ndiqhule nomntu izolo ebusuku ndifuna ukutshintsha i-voicemail yomsebenzi ukuba ithi, "Cofa u-1 ukuba unohlahlo-lwabiwo mali!". Ke… ukuba ungumfundi okanye umbhalisi kwaye ufuna ingcebiso yasimahla, nceda ungakhathazeki xa ndingaphenduli. Ndixakekile ndizama ukuhlawula amatyala!
Inqanaba: Ukugcinwa kwedatha kwiBhokisi!
bing + twitter = ukukhangela okwangoku
Oktobha 22, 2009 ngo-3: 41 PM
Inqaku elihle! Bendinengxoxo efanayo nomntu endisebenza naye izolo malunga nokubaluleka kokumfutshane kwaye ebengayifumani kwaye ekhalaza esithi andizukumbuyisa ngokukhawuleza. Ndimbuzile ukuba ndiphendula ngokukhawuleza njani kwii-imeyile zakhe kwaye wavuma ngokukhawuleza. Sonke kufuneka sibeke phambili ubudlelwane bethu kunye neendlela zonxibelelwano kunye nokudibanisa kwezi zimbini. Ngoku, ukuba andifumani mpendulo yobuqu kolu luvo, ndiza… .ndiqonda ngokupheleleyo.
Oktobha 22, 2009 ngo-4: 15 PM
Enkosi! Ngokukhawuleza nje emva kokuba ndikwazi ukufikelela kumlawuli webhlog kunye nezi zicelo, ndiza kuthi! Ndiyayixabisa inkxaso kule nto, bendinexhala lokubuya umva.
Oktobha 22, 2009 ngo-4: 17 PM
Ndingadlula njani ekuphenduleni kumagqabantshintshi ngoluhlobo, Nick? Unyanisile-eyona nto isebenzayo ngamanye amaxesha yile nto sinyanzeliswa ukuba siyisebenzise. Ndingathanda ukuchitha usuku lonke ezintlanganisweni nasemnxebeni, kodwa loo nto ayihlawuli matyala. I-imeyile iyasebenza kakhulu ekundigcineleni ixesha elininzi imini yonke.
Oktobha 22, 2009 ngo-4: 52 PM
Ndicinga ukuba ndijonga kule bhlog ngokuba 'yi-freebie'… indawo yokungena kwiblogi nganye 'yentengiso. Ukuba ulwazi olukule ndawo aluzukupeyinta wonke umfanekiso-ndingathanda ukusebenza nabanye abafundi bam ukuze bayifikelele kwinqanaba elilandelayo!
Oktobha 22, 2009 ngo-4: 53 PM
Njengomnye wabathengi bakho, uDoug, ndingayingqina into yokuba uyabakhathalela abathengi ngexesha elifanelekileyo. Kupholile ukuba uninzi lwabantu luxabise uluvo lwakho (njengoko kufanelekile), kodwa ndicinga ukuba "ubuyisela" okuninzi ngezithuba zakho zebhlog ezibalulekileyo. Xa inkampani yam ihlawulela iinkonzo zakho, ndilindele ukuhoywa kwangoko. Awusoze wasilela ukuhambisa kwaye leyo yinxalenye yesizathu sokuba ndiza kuqhubeka ndikucebisa. Ukusuka kumbono wabathengi, izinto eziphambili ngokubaluleka zibonakala.
Oktobha 22, 2009 ngo-3: 19 PM
Kuvakala ngathi kufuneka undiqeshe njengomncedisi wakho. Nangona ndiza kuphendula abantu ngokungaphezulu ukuba bangaze bakungenise kwingeniso kuyakufuneka ndihlawulwe ngeenkonzo zam 🙂 Ngokufika kweendaba ezintsha / ukuthengisa / intengiso kuza ukubakho kweengcebiso zasimahla kunye neenkonzo. Ndiza kuyithetha le nto kodwa. Ukuba ufumana ulwazi oluthile okanye ulwazi olusekwe kumagqabantshintshi okanye nge-imeyile ndiyathemba ukuba uya kuphendula kuloo mntu. Ndiyazi ukuba uphendule kwezinye iikhomenti zam zebhlog kwixesha elidlulileyo ndiyazi ukuba umamele kwaye uphendule xa kunokwenzeka. Amanqaku amahle ngeenxa zonke.
Oktobha 22, 2009 ngo-4: 22 PM
UDoug ndibone ii-freebies ezaneleyo ezenziweyo kule ndlela yokuqonda i-gripe yakho ke akukho kubuya mva apha. Andazi ukuba umntu angakuphosisa njani xa uhlawula amatyala. Aba ngabantu abafanayo abanomsindo kwi-U2 ngokuthengisa ngokuthengisa amalungelo kwiingoma zabo kwiinkampani njl.
Okt 25, 2009 ngexesha 12:39 AM
Enkosi Bo! Ungumthengi omangalisayo. Ndiyayithanda inyani yokuba uhlala uthatha ixesha lokuphendula xa ndirongo ngoluhlobo.
Okt 25, 2009 ngexesha 12:43 AM
Ke ndenza ngandlela thile ukungafundi kubafundi bale bhlog endikunike umxholo wasimahla kule minyaka ili-4 idlulileyo? Ngokwenene?
Ibhlog yam ngokuqinisekileyo iyinkunkuma ekhokelayo kodwa kunye neendwendwe ezingama-30,000 ngenyanga, ungacebisa njani ukuba ndilawule ukunxibelelana nomntu ngamnye ofikelela? Ngaba kufuneka ndisebenzise inkqubo yamanqaku? Yeyiphi indlela yokusebenza? Yintoni imbumbulu yomlingo?
Ndijonge phambili ukuva ukuba ungayenza njani.
Oktobha 26, 2009 ngo-10: 35 PM
Ukuba kuphela ixesha likaDoug lalifumaneka simahla!
Oktobha 27, 2009 ngo-12: 50 PM
Inye into oyiphosileyo, ngaba kumnandi kakhulu ukuhlekisa .. Uhlala uhlaziyeke xa abahlobo bakho bekunika ubunzima ..
Ngokukrakra, thanda iposti. Xa ukwishishini elingenakuphatheka, abantu babonakala ngathi baziva kulungile ukuba bacele uncedo simahla, kwaye uhlala unesisa ngokwabelana. Ubuqhetseba kukufunda ukuba mandithini, ndingavuya ukuphendula oko kwintlanganiso ende. Intlawulo yam yile…
Jan 22, 2013 ngo-5: 29 PM
Ngoku uhambe wayenza Doug! Ubhale enye iposti enkulu. Ndiyakuncoma ngokunyanisekileyo ngokwazi kwakho ukufeza yonke into oyenzayo. Ndiyazi ukuba ndingomnye wabo bangaceli rhafu ngexesha lakho ngamanye amaxesha kwaye bendiqhula nawe malunga nokuba nzima ukubamba. Kodwa ndiyacinga (ngethemba) ndiyalinganisa ukuba nokwazi ixesha lakho kubalulekile kwaye kungakukhathazi ngalo okanye ukubamba ingqumbo ukuba awubuyanga nam. Amaxesha amaninzi ndiye ndafumana ukungabikho kwempendulo ngokwakho kwaye abanye bandinyanzele ukuba ndimbe nzulu kancinci kwaye ndibambe intloko yam eludongeni amatyeli aliqela ndide ndizifumanele into kwaye iyimvakalelo entle.
Mna nawe sinamaxesha afanayo kunye neemfuno ezibekiweyo kuthi. Ndizama ukuba luncedo kangangoko ndinokubuza kuye nabani na obuzayo, kodwa ndiye ndayiqonda into yokuba esinye sezona zixhobo zokulawula ixesha endinokuba nazo ezandleni zam kukusetyenziswa ngakumbi kwegama elinobumba ababini, "Hayi" .
Ndiyathemba ukuba ndingafumana imali eseleyo kuyo yonke into kwaye ndiqale ukuthi, "Andinako okwangoku, kodwa mandivume ngomntu onokukunceda."
Jan 22, 2013 ngo-6: 00 PM
Hayi “ngethemba” @jasonbean: disqus - intsebenziswano endiyakhileyo kummandla ibalulekile kum. Inethiwekhi yenkxaso eyandisiweyo endixhomekeke kuyo kwaye ke ndilindele 'ukuyibuyisa' rhoqo! Ungaphakathi apho!
Jan 22, 2013 ngo-6: 16 PM
Kwaye ngokulandelayo mhlekazi! Ngokubhidana! Lixesha leseshoni yokusebenzisana kwethu yanyanga zonke eSt Arbucks engathi ayenzeki kodwa ngonyaka! =)